Isha biyaha nool, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Anna, oo ah haweeney da 'dhexe ah, ayaa gurigeeda timid kadib maalin culeys badan oo xagga shaqada ah. Waxay keligeed deggenayd aqalkeedii yaraa, ee kirada yar. Waxay ku fadhiisatay sariirtiisii ​​gogosha ahaa. Maalin kasta waxay ahayd isku mid. "Noloshu waa faaruq tahay," ayay si aad ah ugu fikirtay. Kali baan ahay.
Xaafad ku taal agagaarka posh, Gary, wuxuu ahaa ganacsade guuleystay, wuxuu fadhiyey dhulkiisa. Wax walba waxay u muuqdeen inay fiicnaayeen banaanka. Weli, wuxuu wax ka maqnaa. Ma uusan sheegi karin waxa isaga ka qaldan. Wuxuu dareemay faaruq gudaha ah.
Dad kala duwan. Duruufo kala duwan. Dhibaato isku mid ah. Dadku kama heli karaan qanacsanaanta dhabta ah dadka, hantida, waqtiyada, ama raaxada. Iyaga, noloshu waa sida xarunta tabaruca - madhan.
Ciise wuu ka tegey Yeruusaalem caabudayaashii Farrisiinta darteed. Goortuu ku soo noqday gobolka Galili, waa inuu dhex maro magaalada Samaariya, oo ahayd meel ay Yuhuuddu ka fogaatay. Reer Ashuur waxay qabsadeen Yeruusaalem, reer binu Israa'iilna waxaa loo kaxaystay Ashuur, oo shisheeyayaal baa loo keenay meeshaas si ay nabadda u ilaashadaan. Dadka Ilaah waxay ku qasmayeen jaahiliin, oo ay "quudhsan jireen Yuhuudda daahirka ah".
Ciise wuu harraadsanaa, kuleylka maalintiii dambe ayaa dhibaato gaadhay. Oo wuxuu yimid xagga ceelkii Yacquub oo ku yaal magaaladii Shiikar, oo halkaasay biyihii ka dhaansadeen. Ciise wuxuu naagti kula kulmay isha biyaha wuxuuna weydiistay iyada inay siiso biyo si ay ula bilowdo wada hadal iyada. Dhaqanka caynkaas ah ayaa Yuhuudda dhex ku dhex abuuray. (Yooxanaa 4,7: 9) Tani waxay sabab u ahayd inay ahayd naag reer Samaariya ah oo la quudhsaday iyo naag. Way ka fogaatay sumcadeeda xun darteed. Waxay lahayd shan nin waxayna la nooleyd nin waxayna ahayd kaligeed meel fagaare ah. Ragga iyo haweenka aan xiriirka lahayn ayaa midba midka kale iskugula hadlayn meelaha dadweynaha.
Kuwani waxay ahaayeen xayiraado dhaqameed uu Ciise iska indho tiray. Wuxuu dareemay inay leedahay wax soosocid, iyo faaruq aan laga buuxin. Waxay raadineysay nabadgelyo xagga xiriirka aadanaha, laakiin ma aysan helin. Waxbaa ka maqnaa, laakiin ma aysan garanaynin waxay ahayd. Iyadu kama helin dhammaystirkeedii gacmaha lix nin oo kaladuwan oo ay u badan tahay in uu ku xadgudbay oo caayay qaar ka mid ah. Shuruucda furniinka ninku wuxuu u ogolaaday nin inuu "naag" haweeney sababo aan sal lahayn darteed. Waa loo diiday, laakiin Ciise wuxuu ballanqaaday inuu damin doono harraadkeeda ruuxiga ah. Wuxuu u sheegay inuu isagu yahay Masiixa la filayay. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada, Haddaad garanaysid hadiyadda Ilaah iyo waa ayo kan kugu leh, I waraabi, waxaad weyddiisan doontaa isaga oo isna wuxuu ku siin doonaa biyaha nool. Ku alla kii biyahan ka cabba, mar labaad wuu harraadi doonaa, laakiin ku alla kii ka cabba biyahaan siin doono, weligiis ma harraadi doono weligiis, laakiin biyahaan siin doono waxay noqon doonaan isha biyaha nolosha weligeed ah oo ku baraya. (Yooxanaa 4,10: 13-14).
Waxay si xamaasad leh ula wadaagtay qibradeeda dadka magaaladeeda, iyo inbadan oo rumeysan Ciise inuu yahay badbaadiyaha adduunka. Waxay bilowday inay fahamto oo ay la kulanto noloshan cusub - inay iyadu gebi ahaanba Masiixa ku jiri karto. Ciisena waa isha biyaha nool: «Dadkaygu waxay leeyihiin dembi laba laab ah: iyagu, isha nool waxay iiga baxaan oo waxay samaystaan ​​berkedo dillaacay oo biyo ma qaban karaan» (Yeremyaah 2,13).
Anna, Gary iyo naag reer Samaariya ah waxay ka cabbi jireen isha adduunka. Biyihii ka soo baxay ma buuxin karin faaruqa nolosheeda ku jirtay. Xitaa rumaystayaasha waxay la kulmi karaan faaruqintan.
Miyaad dareentaa faaruq ama cidlo? Ma jiraa qof ama wax noloshaada ka mid ah oo isku dayaya inuu buuxiyo booskaaga? Ma u baahan tahay farxad iyo nabad noloshaada? Jawaabta Ilaah ee dareemahan faaruqnimada ah waa inaad buuxisaa farqiga noloshaada iyo joogitaankiisa. Waxaa loogu abuuray xiriir lala yeesho Ilaah. Waxaa loo abuuray inay ku raaxaystaan ​​dareenka lahaanshaha, aqbalaadda iyo qadarinta isaga. Waxaad wali dareemi doontaa inaanad dhammaystirnayn haddii aad isku daydo inaad buuxiso farqigaan wax kasta oo aan joogitaankiisa ahayn. Iyada oo loo marayo cilaaqaad dhaw oo dhaw oo lala yeesho Ciise, waxaad ka heli doontaa jawaabta dhammaan caqabadaha nolosha. Kuma niyad jabi doontid. Magaceedu wuxuu ku yaal mid kasta oo ka mid ah ballanqaadkiisii ​​badnaa. Ciise waa aadane isla markaana isla mar ahaantaana sida saaxiibtinimada aad qof kale la wadaagto, waxay ku qaadaneysaa waqti xiriir uu ku kobco. Tan macnaheedu waa inaad waqti wada qaadatid isla markaana wadaagtaan, dhageysataan oo aad uga hadasho wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca. Ilaahow, nimcadaadu qaalisanaa! Dadku waxay magan galaan hooska baalashaada. Way ku raaxaysan karaan hodantinimada gurigaaga, oo waxaad ka waraabisaa biyo aad u badan. Adiga ayaa ah isha nolosha oo dhan, iftiinkaaga waxaan ku aragnaa iftiinka » (Sabuurradii 36,9).
waxaa qoray Owen Visagie